Injini Yesiphakamiso yeRio SEO: Izilawuli Zomkhiqizo Ngokwezifiso Zokumaketha Okuqinile Kwendawo | Martech Zone
Cabanga ngesikhathi sokugcina lapho uya esitolo sokuthengisa - ake sikubize ngokuthi isitolo sehadiwe - ukuthenga okuthile okudingayo - ake sithi isikrufu. Cishe wenze ukusesha oku-inthanethi okusheshayo kwezitolo zehadiwe eseduze futhi wanquma ukuthi ungaya kuphi ngokuya ngamahora wesitolo, ibanga ukusuka endaweni okuyo nokuthi umkhiqizo owufunayo ubukhona noma cha. Cabanga usenza lolo cwaningo bese ushayela esitolo ukuthola nje ukuthi isitolo asisatholakali lapho, amahora aseshintshile futhi njengamanje avaliwe, noma abanawo umkhiqizo esitokweni. Lezi zimo ziyakhathaza ngokuqondakalayo kubathengi abalindele ukwaziswa kwamuva, indawo enembile futhi kungaba nemiphumela emibi embonweni wabathengi ophelele womkhiqizo.
Njengoba kubonisiwe ngenhla, ukuqinisekisa ukunemba kolwazi ezingeni lendawo kuyingxenye ebalulekile yecebo lokuthengisa lendawo yezindawo eziningi ukuhambisa ithrafikhi yezinyawo ezitolo zezitini nodaka. Lokho kushiwo, ukuphathwa kwedatha ngokomlando bekuyinqubo edla isikhathi nenamandla yokusebenzisa abaphathi bendawo nama-franchisee okusika ngokuphelele izinkampani ngaphandle kwesithombe, kushiya indawo yokuqedwa ngokuphelele nokungalungile.
Ukunika amandla imikhiqizo yezindawo eziningi ukugcina ulwazi olunembile kuzo zonke izindawo
I-Rio SEO ingumhlinzeki ohola phambili wamapulatifomu wendawo wezinhlangano zamabhizinisi, ama-ejensi nabathengisi, kabani Vula Ipulatifomu Yasendaweni inikezela izinhlangano zezindawo eziningi ngesixazululo esibanzi, esihlanganisiwe sesixazululo sokumaketha sendawo se-turnkey, kufaka phakathi: Uhlu Lwasendaweni, Ukubikwa Kwendawo, Amakhasi Wendawo, Ukubuyekezwa Kwasendaweni kanye neMenenja Yasendaweni.
Njengengxenye yalo Umphathi Wendawo Isixazululo, iRio SEO isanda kumemezela isici esisha, i- Injini Yesiphakamiso, engeza isendlalelo esingeziwe sokusebenza ukusekela ukuphathwa kwezinkampani nokuqinisekisa ukusebenza kahle kokufakwa kwedatha, ukungaguquguquki nokulawula - kusiza ama-franchisees nabaphathi bendawo abaqhubeka ngokungeza, ukususa, ukuhlela nokuchibiyela idatha yolwazi lwasendaweni ezinhlwini zabo ezifanele. Isixhumi esibonakalayo esisebenziseka kalula se-Injini Yesiphakamiso sinikeza abaphathi bomkhiqizo amandla okunika izigaba zedatha yabahlanganyeli ukuthi bazivuselele futhi basethe nezidingo eziphansi zenkambu zokushicilela.
Izinzuzo ezengeziwe ze-Injini Yesiphakamiso yeRio SEO zifaka:
Izexwayiso zesikhathi sangempela - Yaziswa uma kunezibuyekezo ezintsha zohlu lwasendaweni zokubuyekeza kanye nokuqapha nokulandela ngomkhondo izindawo ezinezibuyekezo ezilindile ngesikhathi sangempela.
Ukubukeza Okuhlanganyelwe - Buka ukuqhathanisa okuseduze bese wabelana ngezixhumanisi ezijulile nabaphathi bendawo nabanye abahlanganyeli ukwenza izingxoxo zibe lula maqondana nezibuyekezo eziqondene nendawo.
Okuqukethwe komuntu siqu - Yenza ngokwezifiso ulwazi lwendawo ngesithombe esingenamkhawulo nokulayishwa kwe-URL, izinkambu zemibhalo evulekile nemininingwane yezimboni ezisebenza ngobuningi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zezindawo ezingazodwana.
Izihlungi Zokucinga Okuthuthukile - Sesha imininingwane ehlukahlukene yendawo nedatha ngesimo, uhlobo, igama, i-ID noma ikheli ukuthola imiphumela esheshayo.
Ngenjini Yesiphakamiso yeRio SEO, abaphathi bezinkampani ezinkampani kanye nabahlanganyeli bendawo bangakuqeda ngokukhululekile ukusabalala kolwazi olungelona iqiniso. Inika amandla nemikhiqizo ukugcina imininingwane yendawo enembile kulo lonke ibhizinisi. Manje, ngamakhono enembile eRio SEO's Suggestion Engine, izinhlobo zebhizinisi emhlabeni wonke zizokwazi ukufinyelela ngqo ekubonakaleni nasekulawuleni okungakaze kube khona ngaphambili, okuphelele kobunikazi bomkhiqizo nobuqotho kumakhulu noma izinkulungwane zezindawo.
UJohn Toth, Umphathi Omkhulu Womkhiqizo eRio SEO
Imikhuba emihle kakhulu ye-SEO Yasendaweni
Ezomnotho wanamuhla wedijithali, abathengi benza usesho lweselula lokuhamba ukuthola izixazululo ezisheshayo zezidingo zabo ngamanani abonakalayo. Kujwayelekile kubathengi banamuhla ukuthi bafunde ukubuyekezwa komkhiqizo, babheke amakhasi e-Facebook enkampani futhi babhekabheke izithombe ku-Google naku-Yelp ukuqonda kangcono nokuhlola uhlobo lomkhiqizo kanye / noma ulwazi lomkhiqizo ngaphambi kokuxhumana nalo. Lokhu kwanda kwemisebenzi yokusesha kwabathengi kukhombisa isidingo esandayo semikhiqizo yokutshala imali kuzisombululo zokumaketha zasendaweni futhi silandele izindlela ezinhle kakhulu ze-SEO zasendaweni ukusiza ukuthuthukisa amawebhusayithi emikhiqizo yomibili imiphumela yosesho lwasendaweni nendawo, ukuqhuba ukusebenza kokuthuthuka nokwandisa ithrafikhi eku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngezansi kunamathiphu amathathu wokukhulisa imizamo yokuthengisa yendawo yokuhlala ukuze ihlale phambili emncintiswaneni.
Lungiselela amawebhusayithi wemikhiqizo yemiphumela yokusesha ephilayo kanye nasendaweni. Le yindlela engcono yokushayela ukuthuthuka kokusebenza nethrafikhi eku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ekusesheni ngezinto eziphilayo, i-Google idinga ukwazi ukuqonda okuqukethwe kwesayithi nokuthi lihlobene kanjani nombuzo osusondele. Amazinga aqhutshwa yimikhuba emihle yendabuko ye-SEO, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwe-schema markup nedatha ehlelekile, isakhiwo sewebhusayithi esenziwe kahle nezindlela ezinengqondo zokukhasa. I-Google bese ibheka izimpawu zekhwalithi nokuzibandakanya ngomzamo wokukhetha impendulo 'ehamba phambili' embuzweni ngamunye.
Ngokuqondene ne-SEO ye-organic, kunezindawo ezimbalwa ezibalulekile zokugxila ukuhambisa inaliti ku-Map Pack rankings. Okokuqala, qinisekisa ukuthi umkhiqizo unedatha ehlanzekile, engaguquguquki kuzo zonke izindawo ukwakha nokugcina ukuthembela kwenjini yokusesha, kanye nokwenza ngcono isipiliyoni sabathengi. Ngemuva kwalokho, sebenzisa ithuluzi lokuphathwa kokufakwa kuhlu kwasendaweni ukuqeda ukufakwa kuhlu okuyimpinda, lungisa amaphutha ngokushesha nezinkinga zokufakwa kuhlu kwamafulegi ezidinga ukungenelela okwenziwe ngesandla ukuze kuqhutshekwe kuqinisekiswe ukuthi imininingwane efanele iyanda. Lapho izindawo ezingatholakala khona ulwazi lendawo yamabhizinisi, izinjini zokusesha ezinokuzethemba ezinkudlwana ezinazo kulelo bhizinisi, okuholela ekuklelisweni kwamazinga endawo.
Qalisa futhi uthuthukise isu lokubuyekeza abathengi elisebenzayo ukunika amandla abaphathi bendawo ukuthi bafune futhi bahlanganyele nabathengi babo ngesikhathi sangempela. Ngaphandle kokungena njalo kwempendulo evumayo yabathengi, indawo yomkhiqizo kungenzeka ingaveli ku-Google Map Pack kaningi ngendlela ebingathanda ngayo. Ukuphathwa kwegama sekubaluleke kakhulu ebukhoneni bendawo yomkhiqizo kanye namazinga. Empeleni, Amaphesenti angama-72 wabathengi ngeke athathe isinyathelo, Qedela ukuthenga noma vakashela esitolo baze bafunde izibuyekezo. Ngokungeziwe kubathengi, izibuyekezo ze-Google zibaluleke ngokulinganayo kumasiginali wezinga lendawo.
Ipulatifomu lokumaketha lendawo laseRio SEO lifakazelwa ukuqhuba ukubonakala okuku-inthanethi, ukubandakanya abathengi kulo lonke uhlelo lokusesha lwendawo nokuwina ibhizinisi lasendaweni ngezinga. Isethi yayo ebanzi, ehlanganiswe ngokukhululekile yezixazululo zokumaketha zasendaweni namathuluzi wokuphatha idumela kufakazelwa ukuthi yandisa ukubonakala komkhiqizo kuzo zonke izinjini zokusesha, amanethiwekhi omphakathi, izinhlelo zokusebenza zamamephu nokuningi.
I-Rio SEO iphakathi kwabahlinzeki abakhulu bezixazululo zokusesha zendawo namathuluzi wokubika we-SEO anelungelo lobunikazi, ukushayela ibhizinisi kusuka kusesho kuya ekuthengiseni imikhiqizo yezinkampani emhlabeni wonke. Bangaphezu kuka-150 amabhizinisi nabathengisi abathembele kubuchwepheshe obusha kanye nobuchwepheshe bokumaketha bendawo yaseRio SEO ukushayela ithrafikhi ye-inthanethi ekhuthazayo, elinganisekayo kumawebhusayithi asendaweni nasezitolo zomzimba. AbakwaRio SEO njengamanje basebenzela izinkampani ezingamaFortune 500 ezimbonini ezahlukahlukene ezibandakanya ezokuthengisa, ezezimali, umshuwalense, izihambi nokuningi.
Ucwaningo Lwamacala we-SEO Yasekhaya - Amahhotela nezindawo zokungcebeleka zonyaka ezine
Izivakashi zehhotela elibizayo ezisesha ukuhlala kwazo okuhle okulandelayo zifuna ukwazi ukuthi hlobo luni lwesipiliyoni abangalulindela endaweni yomkhiqizo ngamunye. Empeleni, Ama-70% wabaseshi bamahhotela kumadivayisi eselula ababheki amagama ezimpawu noma ngisho nezindawo zehhotela, bazingela izinto ezithile ezifana nedamu langaphakathi, indawo yokudlela esizeni noma i-spa esebenza ngokugcwele.
Ngokusebenzisana namaHhotela nezindawo zokungcebeleka ezine, iRio SEO isebenzise ubuchwepheshe bayo bosesho obunamandla nemithi yezinsizakalo ezilawulwayo ukufeza inzuzo elinganisekayo ekubonakalweni kosesho nasekubhukheni kwama-spa weSine Seasons. I-Rio SEO ithengise ngempumelelo izinsizakalo ze-spa ze-Four Seasons futhi isekele ukufakwa kuhlu kwayo ngemininingwane enembile, esesikhathini eyakhe futhi yavikela ukwethembela kwenjini yokusesha kulo mkhiqizo.
Ukusebenza kwosesho olususelwe endaweni kweRio SEO kuqhube imiphumela emihle yebhizinisi yonyaka nonyaka yomkhiqizo we-Four Seasons, kufaka phakathi:
Ukuphakama okungu-98.9% kokunemba kohlu kwasendaweni
Izingcingo ezingama-84% ngaphezulu
Ukubhuka okungu-30% ngaphezulu komunye wemikhiqizo ehamba phambili yokungenisa izihambi emhlabeni.
Tags: ukusesha kwendawo kwamabhizinisiizinkathi ezineGoogle +uhlu lwasendaweniizexwayiso zokusesha zendawoindawo eningivula ipulatifomu yendawoIndawo yokuhlalaIzibuyekezouthi lokhoinjini yokusikiselabuyekeza izinkomba